Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → août → 18 → Tapatapany
# – Ankorondrano. Kidnapping. Niely ny feo teto andrenivohitra fa nisy teratany maorisianina iray tale jeneralina orinasa, nisy naka an-keriny tamin’ny sabotsy lasa teo teny akaikin’ny trano fonenany Ankorondrano. Voalaza tamin’izany fa bandy miisa dimy nisaron-tava no naka azy io. Tsy nisy mangirana kosa anefa ny fandehan’io zavatra io, fomba nitondrana azy, na ny fiara na ny fomba nangalana an-keriny azy. Etsy an-daniny, rehefa nohatonina ny mpitandro filaminana dia nilaza fa toa tsy nisy an’izany zavatra izany taorian’ny fanadihadiana nataon’izy ireo teny an-toerana. Nohamafisian’izany vaovao izany fa tsy eto an-toerana akory io olona voalaza fa nisy naka an-keriny io, hoy hatrany ireo mpitandro filaminana nangalana vaovao.
#-Ankaraobato. Telo lahy namaky trano. Ny faha-16 aogositra teo, nisy bandy elo voalaza fa nanafika tokatrano iray teny Ankadilalapotsy Ankaraobato. Vao tonga ireo jiolahy dia henon’ny tompon’ny trano ka niantso vonjy avy hatrany ireo farany. Vao nahare izany ireo mpangalatra dia lasa nandositra avy hatrany. Ny zandary avy ao Andoharanofotsy no manao ny fanadihadiana.
# – Ampanefy. Lasan’ny mpangalatra ny entana tao an-trano. Mbola olona telo ihany indray koa no voalaza fa nandroba tao amina tokatrano iray teny Soavaina Bevalala Ampanefy ny faha-16 aogositra teo. Novakian-dry zalahy ny varavarana ary niditra izy ireo naka ny entana rehetra toy ny televiziona, ordiantera, radio ana fiara. Raha vao azony izany dia lasa izy ireo. Ny zandary eny Andohoranofotsy nampian’ireo eny amin’ny toby manodidina no nanao ny fizahana. Tsy nisy tratra anefa ireo mpandroba.